Ipulatifomu yomsebenzi wezingalo ezigobekayo ezizimele
Ipulatifomu Yokuphakanyiswa Ehambayo
Izikele ezizihambisayo Phakamisa
Aluminium Ingxubevange Phakamisa Ipulatifomu
Ukuzishayela okuzenzakalelayo Ukuphakamisa
Trailer egibele Boom Phakamisa
Ibhuloho lokuhamba ngomakhalekhukhwini
Ipulatifomu elayisha amaselula
Phezulu & Phandle Nokunqamula
Umshini we-boom ocacisayo unikeza imisebenzi enezici ezahlukahlukene yokubeka phezulu, ngaphandle nangaphezulu, ukuze ukwazi ukufinyelela kunoma iyiphi indawo ofuna ukuyidlula ngezindlela ezahlukahlukene.
Qedela Ukuphepha Amadivayisi
Ukumiswa okujwayelekile kwamadivayisi anesisindo esinezixhumanisi ezine, ukuvikela ngokweqile, idivayisi yokuthola ezenzakalelayo yokuthola ubukhulu beplatifomu nokuphakama (othomathikhi be-amplitude limiter), ukulawula okuzenzakalelayo kwejubane lokuhamba kwe-boom nejubane lokuhamba, kanye ne-high-precision load sensor, ukuqinisekisa ukuphepha nokuzinza kuzo zonke izinhlangothi.
Amandla amakhulu wokuphakamisa
I-boom yenziwa ngensimbi yamandla aphezulu futhi inamandla anele namandla okuvimbela ekuguquguqukeni okuguqukayo Ngokutholwa kwamathuluzi wokuklama wanamuhla njengokuhlaziywa kwezinto ezinomkhawulo nokulingisa okunamandla, i-boom ihlangabezana nezidingo zokuklanywa okulula futhi ineradiyo enkulu kakhulu yokusebenza nokuphakamisa okukhulu umthamo.
Izakhiwo ezinosayizi ongaphansi kuka-16m nohlobo lwe-motor motor zihlangene. okwenza ukuthi i-boom idlule emigodini emincane futhi isebenze esikhaleni esincane.
Isistimu yokuhamba kagesi yokuhamba evaliwe equkethe ipompo eguquguqukayo ye-electro-proportional variable, i-hydraulic control motor eguquguqukayo kanye ne-flow flow vale ingathola isilinganiso esisheshayo, isivinini sedrayivu kanye nejubane lokuhamba eliphansi futhi elizinzile.Lolu hlelo lusebenza kahle futhi lukhiqiza ukushisa okuncane.
UKUNIKEZELWA KWE-PLATFORM Ngokuya ngezidingo zabasebenzisi, ipulatifomu ingahlonyiswa ngamandla we-AC380V nomoya onomfutho womoya.ukuhlangabezana nezidingo ezikhethekile zomsebenzisi.
1.53 × 0.76m
1.83 × 0.76m
2.44 × 0.91m
4.4km / h
1.1km / h
0-1 / 3rpm
Okuqhubekayo kwe-360 °
6.5 × 2kw
45kw / 2200rpm
Langaphambilini Ibhuloho lokuhamba ngomakhalekhukhwini
Olandelayo: Trailer egibele Boom Phakamisa
Ipulatifomu Yomsebenzi Womoya oGobekayo oziPhakamisayo
Aluminium Ingxubevange Phakamisa